DAAWO: Somaliland oo maleeshiyaad cusub ku soo bandhigtay Duleedka Buuhoodle, sheegtayna – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 February W.Gudaha, Wararka Maanta DAAWO: Somaliland oo maleeshiyaad cusub ku soo bandhigtay Duleedka Buuhoodle, sheegtayna
DAAWO: Somaliland oo maleeshiyaad cusub ku soo bandhigtay Duleedka Buuhoodle, sheegtayna
February 12, 2018 |by W LAASCAANO| 7
BUUHOODLE(P-TIMES) – Xili ay sii kordhayso xiisadda labada maamul ee Puntland iyo Somaliland u dhaxaysa ee ku aadan arrimaha dagaalka gobalka Sool, ayaa Somaliland ay beenisay warar shalay la baahiyey oo cadeynayey in ciidamo katirsanaa maamulka Hargeysa ay isku dhiibeen Puntland.
Saxaafadda ayaa loo soo bandhigay maleeshiyaad la sheegay in ay yihiin ciidamada rasmiga ah ee Somaliland, ayna waxba kama jiraan kusifeeyeen ciidamadii shalay isku dhiibay Puntland.
Saraakiil ka hadlay goobtaas ayaa sheegay in ay fulinayaan qadiyada Somaliland ee ah in ay ka madax banaan yihiin Soomaaliyada kale, ayna difaacayaan deegaankaas.
Wasiirka howlaha guud & gaadiidka ee Somaliland Cabdirashiid Qambi ayaa aad uga carooday talaabadii ay shalay sameeyeen ciidamo jifo hoose la wadaaga Wasiirkii hore ee isaga lagu bedelay, kaas oo ka soo jeeda magaalada Buuhoodle.
Mr, Qambi oo ka carooday talaabadaas ayaa abaabulay maleeshiyaad kale oo ka soo jeeda beeshiisa, kuna sugnaa deegaano ku dhaw magaalada Qorilugud ee gobalka Cayn, waxayna sheegeen in ay taageersan yihiin Somaliland.
Maleeshiyaadka qabaa’ilka ee kusugan gobalada Sool & Cayn ayaa marar badan isticmaala hadba dhinicii ay xiligaas ka helayaan danahooda joogtada ah, taas oo noqotay arrimaha ilaa hadda colaaddaha u horseeday gobaladaas.
Awood muujinta siyaasiinta Buuhoodle kasoo jeeda ee kala taabacsan Puntland & Somaliland ayaa gaartay heerkii ugu sareeyey, waxaana dadka arrimahaas la socda ay sheegayaan in ay talaabadan tahay mid kale oo xiisaheeda leh, bacdamaa Is reeb-reebka gobalka Cay nee siyaasiintu uu hadda marayo meel xasaasi ah.
7 thoughts on “DAAWO: Somaliland oo maleeshiyaad cusub ku soo bandhigtay Duleedka Buuhoodle, sheegtayna”
Fardojaan February 13, 2018 at 12:11 am · Edit
Muuqaalka Ninka Ugu Dambeeya Ee
Ka Hadlaya Waa Xildhibaan Ka Tirsan
Barlamaanka khaatumo state
Yuusu February 13, 2018 at 3:36 am · Edit
Dhabayco waxaan kula talinlahaa inay noodaayan magaca yaga. Afar boqol oo sano mudo laga joogo ayaa
Dhabayaco Bari naga soo saareen oonu coloobney Welina was nadaba socodaan.
Mohamad February 13, 2018 at 10:10 am · Edit
Waa arin wanaagsan guul qaranka Somaliland.
Fahad February 13, 2018 at 11:14 am · Edit
Haddii la wareero sidan oo kale ayaa loo yaalaa, bal arkaay waa kuwaa beeshii SSC is bahdilayaan, dhulbahantoo malyuun iyo malyuun tiro kor dhaafaaya, ma Isaaq SNM inaad cey hawadda isu marisaan idib bidey. war iskuhadha taarikhdu waa maduugowdo, facii dhulbahante ceebeeyey ayaa hadda nool, is dabaqabta oo dhaqanka hadda aad wadaan wax ka bedela si taariikhdii iyo magacii dhulbahante u soo laabto.
Alli February 13, 2018 at 1:52 pm · Edit
Kkkkkk,iidorku waa xoolo bal eeg riwaayada ay hadba meel ka dhigayaan.kkkkk
Mohamad February 13, 2018 at 2:36 pm · Edit
Cid kaa xoolaysan, kaa maangaaban halkan kuma arag kkkkkkk iska barooro daciifyohow naaga ahi kkkkkkkkkkkkkkkk.
daldoon February 14, 2018 at 2:39 am · Edit
war kan daba tol u sida(BURTILE) waxaan ku leeyahay ha u gafin ciise dhuux hadaad sheegeyneyso burtinle ama aad tahay dad yowgaa webka lagu soo daayey anigu ma ahi ciise lkn waa dadka ina waardiyeeya GAALKACYO, BUURAHA GAL GALA IYO TUKRAQ HADEYSAN HOR ISTAAGIN GAL GALA ISHAA BOOSAASO MA LA INTIFAAC SAN LAHAA CAAQ MAGAC BURTINLE HA KU CAYAARIN ADEER CIISE DHUUX WAA NIMAN HIIL IYO HOOBA LEH AYAGA LA’AANTOOD GAAL KACYO WAXAAN NOO TALIN LAHAA INDHO YARE, LUGA YARE, SIMOOLE QOLADAA GAARIGA LA QALIBMEY OO WAAN GUMOOBI LAHEYN GAM CADNA WAA NALOO XIRI LAHAA GASHAANTIDA SIDOO NALOO GALMOON LAHAA EE WAXAAN LEEYAHAY NIN KASTOO PUNTLAND KU NOOL GABDHAHAAGA CIISE DHUUX KU DAR SI AY U BATAAN KUWA DUSHA NAGA WAARDIYEEYE GABDHAA FUTO TOL U SIDE(BURTINLE) BAA HADLEEYSA, WAR MIYAADAN TAARIIQDA HEY MARKII QOLOOYINKII HABARGIDIR MARKEY SOO GALEEN GAAL KACYO AY DERBIYADA KU QOREEN CUMAR ARAGNEY EE CIISE MEE INTEY NA DHAAFEEN BEY CADAADO KU QORANEEN CUMAR ARAGTEY CIISE WAA KAN RAGANIMA WEYNAA KKKKKKKKKKKKKK XAGEE JOOGTEY FUTO BURTINLE U SIDE KKKKK DULI FOOQAL DULI